One Deck Dungeon – Ukukopela&Hack – Amathiphu we-Android Cheats
“Njengoba besilindele kwiHandelabra, inguqulo yedijithali ayinasici.” – UDavid Neumann, StatelyPlay.com
"I-One Deck Dungeon inikezela ngemidlalo eminingi yamasu." – UChristian Valentin, I-AppSpy.com
"Umgadli ojulile ngokumangalisayo onezinqumo ezibalulekile okufanele zenziwe ngaso sonke isikhathi." – I-PixelatedCardboard.com
Amakholi we-adventure… kodwa awuhlali unaso isikhathi sokuchitha amahora ulungiselela ishidi lakho labalingiswa noma uphathe uhlu lwakho lwamagama! I-One Deck Dungeon ikuvumela ukuthi ugxumele phakathi ukuze ubhodloze iminyango, egingqa amadayisi, kanye ne-squashing baddies ngesitayela. Thola umuzwa ogcwele wegeyimu ye-roguelike, kubilisiwe engqikithini yayo, futhi ithathwe kudekhi eyodwa yamakhadi kanye nedlanzana lamadayisi!
I-One Deck Dungeon wumdlalo wokuzidela okhasa emgodini womdlali oyedwa noma ababili. Ngaso sonke isikhathi uma udlala, khetha okukodwa noma okubili kwalokhu 6 amaqhawe anesibindi:
• I-Mage – Akuvamile ukuba kube khona inkinga etilongweni angakwazi ukuyixazulula ngesipelingi.
• Iqhawe – Umsebenzi wakhe awukhonzile wejele uqothula abaphikisi bakhe ngokushesha.
• Isikhohlakali – Buka ngokumangala njengoba ethumela izilo ngesitayela.
• Umcibisheli – Inembile, brilliant, ebulalayo ngendlela eyinhlekelele.
• I-Paladin – Ufuna ingozi futhi avikele abangani bakhe ezitheni ezibulalayo.
• Inkungu – Lesi senzo sokwephula seqe emhlabeni we-Aeon's End ukusiza ukuvikela i-Mynerva. Funda kabanzi ku-AeonsEndDigital.com!
Ngemuva kwawo wonke umdlalo, amaqhawe akho enze inqubekelaphambili ekuvuleni kuze kufike 15 amathalente amasha, ukwakha amandla abo emidlalo ezayo.
Bangu 5 izinselele eziyingozi okufanele ubhekane nazo:
• Umhume Wedrako – I-wyvern enesikhumba esiqinile ehlala kulo mgodi ikhetha amaqhawe ayo ohlangothini olucwebezelayo.
• Umgede kaYeti- Uma ukwazi ukusinda emoyeni oshubisa umnkantsha namakhaza ahlabayo, i-snowman enyanyekayo ilindile.
• I-Hydra’s Reef – Nquma ikhanda elilodwa, bese kuvela omunye! Le monstrosity enobuthi ekhiqiza kabusha iyisitha esishelelayo.
• Lich’s Tomb – Izindimbane zezitha ezingafile, iziqalekiso ezimbi, nezigceme zemilingo. Yini engase ihambe kabi?
• I-Minotaur's Maze – Lahla lonke ithemba, lina elingena lapha!
Okuqukethwe okwengeziwe kuyatholakala nge-In App Purchase:
Ukunwetshwa kwe-Forest of Shadows kuphinda kabili okuqukethwe emdlalweni. Ifaka ukuzijabulisa ezindaweni ezintsha eziluhlaza kodwa eziyingozi. Inethiwekhi enkulu yamathaneli angaphansi komhlaba kanye nezindawo zasehlathini ezixhunyiwe zilindele amaqhawe akho!
• 5 amaqhawe amasha – Isazi se-Alchemist, I-Druid, Umzingeli, Umbulali, & Umqaphi
• 5 imigodi emisha – Izindawo zokuhlala e- Indrax, I-Mudlands, Indawo yeVenom, Amanxiwa Ashunqayo, & I-Vile Roots
• Idekhi entsha ephelele yokuhlangana yamakhadi angama-44
• Inqubekelaphambili eyengeziwe igxile, amakhono ayisisekelo, izimbiza, & Okuningi!
Ukunwetshwa kwe-Abyssal Depths kwengeza uhlobo olusha losongo: Abangane abakuzingelayo kuso sonke isifiso sakho sokufinyelela umphathi. Kuhlanganisa 6 Abangane abahlukahlukene, ngalinye linamazinga amabili obunzima. Ngaphezu kwalokho, 2 amaqhawe amasha asemanzini ajoyina ukulwa emanzini angcolile!
Amakhadi okunweba ngamanye:
• Caliana – Le faerie inqume ukuthi i-dungeoneering ibukeka ijabulisa! Ungamvumeli abe nesithukuthezi…
• Ushiseka ngokweqile – Umlindi olungile ulapha ukuze ashaye ububi noma kuphi lapho bucashe khona!
• Umthakathi – Isando sakhe somlingo esinesiphithiphithi sesilungele ukuphihliza amanzi agelezayo abe amachibi aguquguqukayo!
• I-Cinder Plains – I-Hellhound ilindele labo abanganaki ukuze bangene lapha…
• I-Phoenix's Den – Amaqhawe anesibindi kuphela angakwazi ukuphatha ukushisa!
Uma usuyazi indlela yakho yokuzungeza umgodi, umdlalo uthatha cishe 15 imizuzu. Kungase kuthathe isikhashana uma ufunda, noma mfushane kakhulu uma ugxumela emgodini wama-spikes.
Isexwayiso: ungagxumi emgodini wezikhonkwane.
Wonke amakhadi aku-One Deck Dungeon anamabhokisi amaningi anemibala. Roll idayisi lakho, bese uzama ukugcwalisa amabhokisi amaningi ngangokunokwenzeka. Kuwo wonke umuntu awugcwalisi, uzobhekana nemiphumela ezinhliziyweni nangesikhathi! Uma usuqedile ukuhlangana uzokwazi ukufunda ikhono elisha, thola into entsha, noma uthole ulwazi ukuze ukhuphule izinga leqhawe lakho.
Uyemukelwa emhlabeni we-One Deck Dungeon. Uhambo lulindile!
Idinga i-NEON CPU kanye 1 GB RAM.
I-One Deck Dungeon iwumkhiqizo onelayisensi esemthethweni ye-"One Deck Dungeon" evela ku-Asmadi Games.
Ukuze uthole olunye ulwazi, Bheka i-OneDeckDigital.com
← I-Battle Table Tennis – Ukukopela&Hack Isikhathi sokudlala sikaPoppy Huggy Wuggy – Ukukopela&Hack →